Football Khabar » ‘नेइमारलाई घर फर्काउन’ बार्सिलोनाका ‘केही स्टार’ खेलाडीले क्लबलाई पैसा दिने !
‘नेइमारलाई घर फर्काउन’ बार्सिलोनाका ‘केही स्टार’ खेलाडीले क्लबलाई पैसा दिने !
हालसालै सरुवा बजार बन्द हुने अन्तिम दिनसम्म पनि स्पेनिस बार्सिलोना आफ्ना पूर्वस्टार नेइमारलाई पुनः अनुबन्ध गर्न लागिपरेको थियो । तर, पिएसजीको महँगो मूल्यबीच बार्सिलोनाले आँट्न सकेन । दुई वर्षअघि आफैंले विश्वकीर्तिमानी २२२ मिलियन युरोमा बेचेका खेलाडीको मूल्य बार्सिलोनालाई दुई वर्षपछि फलामको चिउरा बन्यो ।
पिएसजी नेइमार बेच्न तयार भए पनि मागअनुसार रकमका प्रस्ताव बार्सिलोनाबाट आउन नसक्दा उसले आफ्ना खेलाडी नछाडेको बताइन्छ । बार्सिलोना नेइमारका लागि बढीमा २०० मिलियनभन्दा बढी हाल्ने पक्षमा देखिएन पनि पिएसजी ३०० मिलियनभन्दा तल झर्न नमानेको रिपोर्ट सरुवा बजारमा हिट भए ।
खास गरी नेइमार फर्काउन बार्सिलोनाको बोर्डका अधिकारीभन्दा त्यहाँका केही खेलाडीको दबाब मुख्य रहेको चर्चा अहिले पनि छ । कप्तान लिओनल मेस्सी, लुइस स्वारेज, जेरार्ड पिकेलगायत खेलाडीले क्लबसँग नेइमार फर्काउन अनुरोध गरेपछि बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेप मािरया बार्टोमेउ नेइमारतर्फ फर्किएका थिए ।
स्मरण रहोस्, गत वर्ष एक कार्यक्रममा बोल्दै उनै बार्टोमेउले ‘आफूहरूसँग उसामान डेम्बेले छन् र उनी नेइमारभन्दा निकै उत्कृष्ट छन्’ भन्दै बार्सिलोनाले कहिल्यै पनि नेइमार फर्काउनेबारे नसोच्ने बताएका थिए । तर, अहिले उनै बार्टोमेउ नेइमार फर्काउन लागेका छन्, मेस्सीलगायत खेलाडीका लागि भए पनि ।
यसैबीच, क्लबले पैसा अभावकै कारण नेइमार अनुबन्ध गर्न नसक्ने भए आफूहरू पैसा सहयोग गर्न तयार रहेको भनेर ‘केही स्टार’ खेलाडीहरूले क्लबसँग प्रस्ताव गरेको रिपोर्ट आएको छ । यो कुराको स्वीकारोक्ति घुमाउरो पारामा क्लबका अध्यक्ष बार्टोमेउले पनि एक अन्तर्वार्ताक्रममा गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘हामी अचानक नेइमारका लागि बाहिर आयौं । ड्रेसिङ रुम नेइमारलाई चाहन्छ । र, हामीले प्रयास गरेका थियौं ।’
स्पेनिस मिडियाले बार्सिलोना बोर्डका अधिकारीको स्रोत उद्धृत गर्दै प्रकाशित गरेका खबरअनुसार केही खेलाडीले ‘नेइमारलाई घर फर्काउन आफूहरू पैसा साझेदारी गर्न’ तयार रहेको भनेर प्रस्ताव गरे पनि क्लबले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो । ती खेलाडीले महँगो मूल्य नै नेइमार फर्काउन बाधक नबनोस् भन्ने चाहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
बार्सिलोनामा खास गरी मेस्सी, स्वारेज र पिके नेइमार फर्काउन लागिपरेका छन् । सन् २०१३ देखि २०१७ सम्म बार्सिलोनामा रहेका नेइमारको यी सबै खेलाडीसँग निकै सुमधुर सम्बन्ध रहेको छ ।
प्रकाशित मिति २१ भाद्र २०७६, शनिबार १६:०३